Izindaba - I-Resistance Band Home Workout
I-Resistance Band Home Workout
Njengoba isizini yomkhuhlane kanye ne-covid-19 spiking njengamanje, izindawo zokuzivocavoca eziningi zivalwa okwesikhashana futhi.Lokhu kuvivinya umzimba kungenziwa ekhaya futhi kudinga kuphela ibhendi yokumelana evulekile.
Amabhendi afika ngobubanzi obuhlukene.Ukuqina kobubanzi kunikeza ukumelana okwengeziwe futhi kuba nzima ukuyisebenzisa.Ungase ufune ukuthenga uhla lwamabhendi ukuze uthuthuke njengoba uqina.
Ukusebenzisa amabhendi kungase kuzwakale kuxakile uma uqala.Okubalulekile wukuqinisekisa ukuthi ulawula ukushuba kanye nesivinini sokunyakaza kwakho ukuze ungawaqedi amabhendi ekupheleni kwe-rep ngayinye.
Kunezinzuzo eziningi zokufaka amabhendi okumelana njengengxenye yokuzungezisa kwakho okujwayelekile kokujima.Zikusiza ukuthi wakhe amandla, uthuthukise ukuhamba kwakho futhi uqashe imisipha yakho eqinile ukuze ikusize wakhe amandla ayisisekelo kanye neqembu lemisipha eliyinhloko elisebenzayo.Baphinde bakunike ikhefu emshinini wokuvivinya umzimba futhi njengenzuzo eyengeziwe ayisindi futhi iyaphatheka ukuze ukwazi ukuyithatha uma usohambweni.
Kulungele 1 5 amaminithi I-Cardio
Imigqa Ehlezi Nebhande 4 12 30 imizuzwana
I-Lateral Phakamisa ngebhendi 3 8 ihlangothi ngalunye 30 imizuzwana
I-Resistance Band Shoulder Cindezela 4 12 30 imizuzwana
Ama-Bicep Curls anebhendi 4 15 30 imizuzwana
Imigqa Eqondile enebhendi 3 12 30 imizuzwana
Yehlisa umoya 1 5 amaminithi I-Cardio
Imigqa Ehlezi Nebhendi Yokumelana
Hlala phansi imilenze iqonde phambi kwakho.
Ukubamba izibambo zebhande lokumelana, beka isikhungo sebhande eduze kwezinyawo zakho, bese ugoqa isiphetho ngasinye ngaphakathi nokuzungeza unyawo ngalunye isikhathi esengeziwe ukuze wenze iluphu onyaweni ngalunye.
Hlala mude ngama-abs tights bese ubamba izibambo phambi kwakho ngezindololwane ezigobile eduze kwakho.
Donsela izibambo emuva zize zibe eduze nohlangothi lwakho futhi izindololwane zibe ngemuva kwakho.Khipha kancane.
I-Lateral Phakamisa ngebhendi
Yima izinyawo zakho zihlangene ekugcineni kweluphu.
Bamba amaphethelo ebhande, uvumele izibambo zilenge phansi izandla zakho zibhekane.
Gcina i-torso yakho isendaweni, phakamisa izingalo zakho ziqonde emaceleni akho.
Yima kancane, bese ubuyela kancane ekuqaleni.
I-Resistance Band Shoulder Cindezela
Bamba omunye umkhawulo bese ulethe ezingeni lesifuba sakho izintende zibheke phezulu.
Gcina ukuma okuqondile futhi ubheke phezulu kancane.
Phusha phezulu kuze kube yilapho izindololwane zakho zivaleleke ngaphandle, bese ubuyela kancane endaweni yokuqala.
I-Resistance Band Bicep Curls
Yima ngazo zombili izinyawo ebhandeni lokumelana ubambe izibambo ezinde eduze kwezinhlangothi zakho izintende zibheke phambili.
Songa izandla kancane zifike emahlombe, ucindezele ama-biceps futhi ugcine izindololwane eduze kwezinhlangothi zethu.
Khulula izingalo zibuyele phansi endaweni yokuqala.
Imigqa Eqondile Nebhendi Yokumelana
Ukubamba izibambo zebhande lokumelana, beka isikhungo sebhande ngaphansi kwezinyawo zakho
Donsela izibambo phezulu zize zibe eduze kwezindlebe zakho futhi izindololwane zibe ngaphezu kwekhanda lakho.Khipha kancane.
I-Dumbbell Price, Isethi ye-Dumbbell, I-Non Slip Yoga Mat, I-Dumbbell Eguquguqukayo, I-Tpe Yoga Mat, I-Eco Friendly Yoga Mat,